Bola Lalàna Rosiana Mpisolovava Online Fakan-Kevitra
Sary Nahazoan-Lalàna mitsangàna eo ambany na fanjakana federaly sy ny fitsipika mifehy ny tombontsoa, ny fitantanam-bola ny fiampangana, vola fandrosoana, ny fiampangana ho fanitarana ny voninahitra mihoatra ny mialoha ny nametraka fetra, ny tara sarany na fandikan-dalàna noho ny fiampangana, premiums amin'ny bola ny fiainana sy ny carte loza sy fiantohana ara-pahasalamana, isan-taona saram sy fiampangana hafa sy ny saram, sy ny maro hafaRaha ny raharaham-barotra famatsiam-bola ny mpanjifa, tsy maintsy manaraka ny lalàna federaly mahakasika ny varotra bola ny mpanjifa, ary koa ny toetry ny lalàna ao whichever fahefana izany no miasa. Federal sary nahazoan-ny lalàna dia ahitana ny Marina ao Mampisambotra Act (TILA), ny ara-Drariny Bola Billing Act (FCBA), ny Fitovian-Bola Opportunity Act, ny ara-Drariny Tatitra Bola Act (FCRA), sy ny ara-Drariny Trosa Famoriam-bola ny fomba Fanao Asa (FDCPA). Io Fihetsika io dia manampy mpanjifa fantatrareo izay izy ireo dia nanaiky ao amin'ny bola amin'ny raharaham-barotra. Izany dia mitaky ny raharaham-barotra mba hamoaka ny marina bola iombonana sy mifehy ny fomba bola mpamatsy afaka hanambara.
Ilaina ampamoaka ahitana isam-bolana ny fitantanam-bola ny fiampangana azy, ny zanabola isan-taona, ny fandoavam-bola noho vita, tanteraka ny fivarotana ny vidin-javatra, sy ny fomba tara fiampangana ireo fanombanana sy ny fomba be izy ireo.
Ity lalàna federaly mitantana billing fahadisoana amin'ny tantara bola. Ny mpanjifa tsy maintsy mampahafantatra ny carte mpanome izay ilaina ao anatin'ny andro ny diso-poana, ary ny crédit orinasa dia tsy maintsy mamaly ao anatin'ny andro. Ny tompon-trosa dia tsy maintsy mitarika ny antonony famotorana ary, ao anatin'ny andro ny fahazoana ny mpanjifa ny taratasy, hazavao ny antony mahatonga ny volavolan-dalàna ny marina na tsy marina ny fahadisoana. Ny tsy fahombiazana ny tompon-trosa, ny manaraka dia hiafara amin'ny $ bola ny mankany an-tany vola, na raha toa ilay tolo-dalàna dia marina, ary ny tompon-trosa dia tsy afaka ny tatitra mikasika ny vola ho bola sampan-draharaha misahana mandra-ny tsy fitovian-kevitra dia tapa-kevitra. Crédit orinasa dia mety tsy manavakavaka ny mpangataka ny fototry ny foko, loko, ny fivavahana, ny firenena niaviany, taona, firaisana ara-nofo, na ny sata ara-panambadiana. Ny hany azo hamarinina faladiany ho an'ny fihenan'ny mba hanitatra bola dia zavatra toy ny fangatahana ny sata ara-bola (vola sy tahiry) sy ny carte firaketana an-tsoratra. Na dia nisy aza ny fandraràna manohitra ny taona fanavakavahana, ny crédit orinasa afaka mandà ny mpanjifa izay tsy ampy taona. Izany no lalàna federaly voalohany indrindra mifandraika amin'ny bola tatitra ny sampan-draharaha. Izany dia miaro ny mpanjifa avy haiving ny taratasim-panamarinanao ho bola ny fikorontanana vokatry ny tsy feno na diso ny vaovao hita ao amin'ny tatitra bola. Ny lalàna no manome ny mpanjifa ny zo handray ny dika mitovy ny tatitra bola sy ny fanamby vaovao tsy marina voarakitra ao aminy. Raha ny raharaham-barotra ny fitaterana vaovao tsy marina dia tsy manova na mamafa ny vaovao tsy marina rehefa avy nampitandrina ny inaccuracy, ny mpanjifa dia afaka mampitombo ny -teny fanambarana ny antontan-taratasy manazava ny na ny lafiny ny tantara. Ity lalàna federaly adiresy mahery setra ny fomba ampiasain'ny antoko fahatelo-trosa hetra. Io fihetsika io dia afaka mamorona madio ho an'ny manorisory na mahery setra fanao, toy ny miteny ny olona hafa noho ny mpitrosa momba ny adidy, matetika miantso, niezaka nanangona be tsy noho ny, fanahy iniana tatitra diso be mba tatitra bola sampan-draharaha, sy ny sisa. Lahatsoratra nosoratan'i mpisolovava sy ny manam-pahaizana eran-tany miresaka ny lafiny ara-dalàna mifandraika amin'ny Mpitrosa sy ny tompon-Trosa ao anatin'izany ny: bankirompitra, famoriam-bola, bola sy ny antoka, ny trosa, ny fanarenana sy ny insolvency.
real estate fisoratana anarana rosiana Mpisolovava
ny asa ao amin'ny fanomanana ny tahirin-kevitra mikasika ny sisin-tany ny fiarovana ny tontolo iainana faritra ny zavatra herinaratra grid foto-drafitrasa (Fandaharana), dia nanamafy ny Filankevi-pitantanana, ny Orinasa mampiasa amin'ny tany maro eo ambanin'ny zavatra amin'ny faritra tanteraka ny momba hektara ny termless tsara ny fampiasana
Tao Ejipta, ny fepetra noraisina mba hanatsorana ny fomba fiasa ara-panjakana ny, inter alia, ny fanomezana ny fitsarana ny tolotra amin'ny iray nijanona-shop rafitra maro ny fitsarana, ny fanatitra amin'ny fitsarana ambony ny asa fanompoana amin'ny alalan'ny governemanta Ejiptiana ny vavahadin-tserasera, fanomezana ho an'ny zava-bita tsara ambanin'ny Tany sy ny Real Estate Tetik'asa, ny Banky iraisam-pirenena dia manana fotoana maharitra ny asa eo ambany Faharoa Tany Amin'ny lafy sy ny fahalemeny ny Lalàna"ao Amin'ny Fanjakana Real Estate Cadastre"voatanisa sy ny soso-kevitra teo izay azo atao ny fanovàna ny rafitra Ny famelabelarana nifantoka tamin'ny olana mifaninana hanatsara ny teknika sy ny fampiasam-bola manintona, zana-paritra stratejika fanomanana sy ny fanatanterahana ny paikady, zava-baovao sy R F varotra, ny fikambanana efa nafindra tao amin'ny united banky angona izay daily replenishes miaraka ny tahirin-kevitra avy amin'ny sampana rehetra ny faritra.
ny governemanta dia mamela ny fanokafana ny tolobidy fomba ho an'ny safidy ny tetikasa mpiantoka.
Iraisam-Pirenena Mitondra Fiara Ny Fahazoan-Dalana - Tserasera Rosiana Mpisolovava
Tsy nanaraka ny programa kely vondrona miaraka ny famafana ny tolo-fe-potoana farany ny jolay amin'ny zavatra mikasika ny fanomanana ny tolo-kevitra mifandray amin'ny ny fanapahan-kevitra dingana ny, - (- (IDP), indrindra ny fandikan-teny an-toerana ny fiara ny fahazoan-dalana (DDP), fototry ny porofo fa ny mpihazona manana manan-kery fiara ny fahazoan-dalana ao ny ny firenena an-trano(rahatrizay antsoina hoe IDP) ny tahirin-kevitra ofisialy manome alàlana ny olona hitondra fiara ao amin'ny firenena hafa noho ny azy manokana. Ho valin'ny fitomboan'ny porofo fa iraisam-pirenena mitondra fiara ny fahazoan-dalana dia fitsarana namoaka ny, inter alia, amin'ny alalan'ny Aterineto, ny fanitsiana natolotra amin'ny andàlana dia natao hanamafisana ny fitsipika mikasika ny fanolorana ny, ny Iray amin'ny fiantraikany lehibe ho izay, ary rehefa afaka izany vanim-potoana tetezamita, Arakaraka ny Antoko ny Fivoriambe dia tsy mitaky ny fanolorana ny iray. dia ho namoaka ihany ny Voan'ny ny Antoko eo izay fari-ny mpihazona manana ny ara-dalàna-ponenana sy izay dia namoaka an-toerana ny fiara ny fahazoan-dalana na efa fantatra ny fiara ny fahazoan-dalana navoakan'ny hafa Arakaraka ny Antoko izany dia tsy ho manan-kery amin'ny faritany. Ankoatra izany, Kazakhstan manolo-kevitra fa ny fiheverana ho azo nomena ny fahafahana manavaka avy amin'ny Fivoriambe lahatsoratra momba ny satan'ny-pirenena ny fiara ny fahazoan-dalana, ary manolo-kevitra ny famoahana sy ny fampiasana ny iray, no tena hanatsorana ny fandraisana anjara amin'ny lalana fifamoivoizana na any amin'ny faritry ny famoahana ny fahazoan-dalana sy any amin'ny tanin'ny firenena hafa.
raha ny eto an-toerana mitondra fiara ny fahazoan-dalana dia mihantona sy ny fampidirana ao amin'ny Fivoriambe ny kely indrindra nifanaraka ny toe-piainana noho ny olana ny fiara ny fahazoan-dalana.
ao amin'ny fomba fijery amin'ny fitomboan'ny porofo fa iraisam-pirenena ny fahazoan-dalana dia bebe kokoa matetika ny fitsarana namoaka, indrindra fa amin'ny alalan'ny Aterineto.
Ny SC WG dia mahafantatra ny asa ho tanterahina ny ECE Miasa ny Antoko eo amin'ny Lalana Fifamoivoizana ny Fiarovana, izay tompon'andraikitra ny fikojakojana ny ary Vienne Fivoriambe teny an-Dalana ny Fifamoivoizana, izay ahitana modely endrika ho an'ny eto an-toerana sy ny SC WG, ao amin'ny faritany raha toa izy ka manao ny faritany ny fanitsakitsahana ny lalàna ny fanaovana azy mendrika noho ny fandikan-dalàna ny déchéance ny fahazoan-dalana.
Ao amin'ny Andininy faha- ny Fampiatoana ny filazana marina ataon ny fiara ny fahazoan-dalana - ny vondrona kely dia nanolo-kevitra ny hanampy ny vaovao andininy izay mitaky ny Voan'ny ny Antoko mba ho azo antoka fa raha ny mpamily sy ny mpanampy an-trano ny fahazoan-dalana dia niala, ny ny, Ny Working Group-kevitra fa ny adidy mba mitondra koa ny herisetra an-tokantrano fiara ny fahazoan-dalana, ary ankehitriny dia miara.
findramam-bola hamaly rosiana Mpisolovava
Fampindramam-bola madinika ny andrim-panjakana amin'izao fotoana izao hanompo eo ho eo tapitrisa ny olonaIzy ireo mampiavaka akaiky ny fifandraisana amin'ny mpanjifa. mba hamarana namarana findramam-bola, fifanarahana amin'ny samirery fomba raha ny misambotra tsy manaiky ny tolo-kevitra ara-bola ny andrim-panjakana mba hampitomboana ny tahan'ny findramam-bola na ny vola na inona na inona hafa vola nomen'ny nandritra ny vanim-potoana avy amin'ny famaranana ny fifanarahana fiantohana ho an'ny SEB findramam-Bola ny Fiarovana mandra-bolana (rehetra) teo aloha ny fisehoan-javatra ny hetsika azo antoka, fiantohana ny soa no ho nokajiana eo amin'ny fototry ny SEB, ny Fanombanana ny mason-tsivana ho an'ny olona tafiditra amin'ny ankapobeny ny tombana ny amin'ny izay misambotra, ny na ny toetra manokana, ara-bola toerana, ary matihanina laza, fanombanana ny misambotra ny creditworthiness, ny fanombanana ny antoka natolotry ny, mba hampihatra ny didim-noncash varotra amin'ny alalan'ny ATM na vaovao teboka na Vola Karama ny fandoavam-bola terminal, masìna ianao, tsindrio ny bokotra.
Ao amin'ny Fanjakana Biraon'ny Mpampanoa lalàna dia namporisika ny mba hamorona fanamiana fototra ho an'ny tsy-doha ny fiara ny fahazoan-dalana rosiana Mpisolovava
Fomba fanao ny tsy fananana ny mpamily nitsangana teo amin'ny tantara ao narcological toeram-pitsaboana, ny fahazoan-dalana hitondra fiara ny Federasiona rosiana efa misy, na izany aza ny fampiharana tokony ahitsy noho ny fahariana ny fanamiana pototry ny toeram-pitsaboana sy ny fifamoivoizana polices, ny manam-pahefana mahasolo tena ny sampan-Draharahan'ny fampanoavana ao amin'ny biraon'ny Federasiona rosiana ao ny Urals Distrika Federaly Alexander Mikhailovich Karenna ao ny Rivotra fandaharana voalazaNy mpikambana ao amin'ny Filan-kevitry ny Federasiona Federaly tao amin'ny Antenimieram-pirenen'ny Federasiona rosiana i Yelena Miguelina nanambara fa dia fangatahana avy amin'ny Federaly asa Fanompoana ho an'ny fanaraha-Maso ny Sehatry ny Serasera, ny Teknolojia Vaovao-Bahoaka sy ny Serasera hamantatra sandoka ny vaovao fa izy voalaza fa niangavy ny mba handrara ny asa amin'ny yoga mialoha ny fitsarana ny fitazonana foibe.
fanarenana ny lasa - ny rosiana Mpisolovava
Ny Ivelany ny Auditor fahazoan-dalana hiditra fa UNESCO hamaha indray mandeha ho an'ny rehetra ny olana ny amin'ny fanonerana ny fidiram-bola ny hetra aloa amin'ny alalan'ny mpiasa izay ireo olom-pirenena ao Etazonia ny fe-potoana tsy maintsy hatao mihoatra noho izay tsy maintsy niaiky fa tsy ny toe-quo dia miovaHo avy ny vola mivoaka ao amin'ny vondrona ara-bola ny toe-bola izay miaraka fizahana ny fahasimban'ny dia tombanana eo amin'ny fototry ny nanaovana ny vola mivoaka ny fananany ary ny zava-nitranga, ary koa ny eo anivon'ny Firenena Mikambana-Rafitra ny Lehiben'ny Mpanatanteraka Birao ho an'ny Fandrindràna Avo lenta misahana ny Fitantanana.
mpisolovava - Tserasera rosiana Mpisolovava
Ny fandikan-teny ao amin'ny sehatry ny mpisolovava amin'ny teny anglisy ny rosiana amin'ny Aterineto rosiana Mpisolovava: ny fahaleovantenan'ny mpitsara sy ny mpahay lalànany vehivavy mpisolovava. ny andraikitry ny mpisolo vava. ny isan'ny mpisolovava Izy no miahiahy momba ny fifandraisana misy eo amin'ny Fitsarana momba ny Lalampanorenana sy ny Filoha ary nanohana ny fanontaniana efa nanangana ny momba ny fitakiana ny fisoratana anarana.
trosa fitambarana amin'i Rosia - ireo orinasa
(manana fahazoan-dalana manokana ho azy mba hanome ny tolotra ara-dalàna), amin'ny fananany manokana ny tsy fikarohanaKoa, dia afaka miasa toy ny hetra - ara-Dalàna ny toro - solontena ara-dalàna ao amin'ny rosiana manampahefana - dalàna sy ny indostria fikarohana - ara-dalàna ny angona sy ny vaovao fandinihana Hahitana izay firenena mitady mpamatsy ao amin'ny firenena, ary ny hafa rehetra ny fikarohana mivoaka amin'ny Europages firenena ny firenena. EUROPAGES dia Eoropeana BB sehatra ao fiteny, amin'ny tapitrisa ho an'ny orinasa, indrindra fa ireo orinasa mpanome tolotra aterineto, wholesalers sy mpizara.
Isam-bolana mihoatra ny tapitrisa tsy manam-paharoa mpitsidika avy manerana izao tontolo izao mampiasa ny sehatra fikarohana ho an'ny vokatra, tolotra sy ny mpamatsy.
Ny fianakaviana Lalàna sy ny fisaraham-Panambadiana ny mpisolovava ao Rosia PowerPoint Fanolorana
Miteny roa, rosiana ary ny fiteny malagasy
Download Politika: ny Votoaty ao amin'ny Tranonkala dia omena ho anareo TAHAKA ny ho an'ny vaovao sy ny fampiasana manokana ary mety tsy ho amidy fahazoan-dalana nozaraina tao amin'ny tranonkala hafa nefa tsy nahazo fanekena avy amin'ny mpanoratraRaha misintona, raha noho ny antony tsy afaka misintona ny fanolorana, ny mpitory dia mety efa voafafa ny rakitra avy amin'ny lohamilina. Ity tranokala ity dia natao ho toy ny teny fotoana ho an'ireo izay mila fanampiana ara-dalàna sy mikatsaka ny hanao ny fitondran amin'ny rosiana ny fianakaviana ny lalàna sy ny lalàna momba ny fisaraham-panambadiana ho toy ny mora araka izay azo atao. Na izany fanambadiana, ray aman-dreny manan-danja, ny fanambadiana fananana tanàna, prenuptial fifanekena, fifanarahana amin'ny fanambadiana, ny vady manohana, ny ankizy fanohanana ny fisaraham-panambadiana na fomba, ity tranonkala ity dia hanompo anao toy ny mpitari-dalana amin'ny lafiny samihafa ny rosiana fianakaviana lalàna, ny fisarahana sy ny fisaraham-panambadiana. Ny rosiana fianakaviana lalàna manome nandritra ny roa karazana ny fanambadiana famaranana ny paika: ara-Pitsarana sy ara-Panjakana. Ny fisaraham-panambadiana ara-panjakana dia omena amin'ny alalan'ny Asa an-trano ny Fisoratana anarana amin'ny Biraon'ny (matetika fantatra amin'ny anarana hoe ZAGS).
Amin'ny ankapobeny dia misy ireo mpivady izay tsy manana ankizy tsy ampy taona ny ny fifandraisana, ary efa tonga ny fiaraha-mientana ifampizarana fifanarahana ny fisaraham-panambadiana.
Ny ara-pitsarana fomba ny fanambadiana famaranana mihatra amin'ny toe-javatra rehetra izay misy ny mpivady manana ankizy latsaky ny taona na, raha ny vadiko na ny vadiny fifaninanana ny fisaraham-panambadiana na ny iray tamin'izy ireo, rehefa tsy te, na tsy afaka ny hametraka ny mpiray fisaraham-panambadiana fampiharana amin'ny an-trano ny Asa Birao Fisoratana anarana.
Raha ny fisaraham-panambadiana dia manana fitsarana efa namoaka tao amin'ny hafa ny fahefana, ary dia mbola miandry ny fotoam-pitsaràna na efa naheno, ny fitsarana dia mety manala ny fisaraham-panambadiana fampiharana. Manan-danja iray hafa tsy fahatanterahana dia ny fampiharana ny fisaraham-panambadiana dia tsy azo nametraka nandritra ny vadiny bevohoka sy mandra ny zaza lasa iray taona ny taona, raha tsy ny vadiny manaiky fa na antontan-taratasy ho fisaraham-panambadiana fampiharana ny tenany. Efa manao toy ny rosiana fianakaviana mpisolovava, fampanoavana sy ny barrister, nandritra ny taona, dia misahana manokana ny fianakaviana iraisam-pirenena ny lalàna manan-danja. Nandritra ny taona maro aho dia efa mpikambana ao amin'ny IAML, maneran-tany fikambanana manao ny fianakaviana mpisolovava izay eken'ny ny namany ho toy ny tena za-draharaha sy mahay fianakaviana lalàna ny manam-pahaizana manokana ao amin'ny firenena tsirairay avy.
Efa avo fepetra takina amin'ny teny rosiana sy ny lalàna Aostraliana, ny farany dia mitondra be dia be ny fitoviana amin'ny ANGLETERA sy ETAZONIA ny Fianakaviany ny lalàna.
Efa nampihatra ny lalàna sy hita ao amin'ny fitsarana ao Rosia sy any ivelany araka ny barrister sy ara-dalàna ny manam-pahaizana manokana ao amin'ny lalàna rosiana, isan'izany ny Faratampony Ny fitsarana any Rosia, ny Fianakaviana Fitsarana ny Aostralia, ny Fitsarana Ambony ao amin'ny UK, ny Fitsarana Ambony ao Holandy sy ny hafa. Rosiana ny fisaraham-Panambadiana sy ny Fianakaviany ny Lalàna dia, amin'ny ankapobeny, dia malalaka kokoa noho ny Tandrefana Fianakaviana Lalàna. Na izany aza, ny rosiana ny rafitra ara-dalàna mety ho sarotra, raha amin'ny fiteny samihafa dia mety ho sarotra hiatrehana. Izaho miara-miasa amin'ny samy vahiny sy rosiana ny mpanjifa amin'ny lafiny iraisam-pirenena ny fomba fanao mahita ahy hanao zavatra voalohany indrindra amin'ny maha-rosiana ny fianakaviana mpisolovava izay antoko iray na izy roa ireo teratany vahiny. Ny asa hanitatra ny lafiny manaraka ireto ny rosiana Fianakaviana Lalàna: ara-bola ny fifanarahana, matetika fantatra amin'ny anarana hoe pre-nuptial na post-nuptial fifanarahana, sarotra multijurisdictional fananana toe-javatra, ray aman-dreny manan-danja, ao anatin'izany ny ankizy famindran-toerana, ny ankizy fanohanana sy ny vady ny fikojakojana, ny lova sy ny mifandray amin'ny sehatry ny lalàna. Izaho manome tolotra amin'ny maha-fianakaviana ny mpisolovava sy ny fisaraham-panambadiana mpisolovava hatramin'ny taona aho rehefa niaiky ny fomba fanao araka ny mpisolovava rosiana, ny mpikambana ao amin'ny Efi-trano Fisotroana amin'ny Faritr'i Moskoa. Tamin'ny taona, koa aho nanatevin-daharana ny Moskoa Bar Mpanelanelana amin'ny Mpisolovava. Tamin'ny taona lasa mpiara amin'ny Akademia Iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny fanambadiana Mpisolovava, maneran-tany fikambanana manao ny fianakaviana mpisolovava izay eken'ny ny namany ho toy ny tena za-draharaha sy mahay ny fisaraham-panambadiana mpisolovava sy ny fianakaviany ny lalàna ny manam-pahaizana manokana ao amin'ny firenena tsirairay avy. Raha ny faritra ny fahaizana ahitana ny endrika samihafa ananan'ny Fianakaviana ny lalàna Sivily, ny Fananana, ny Hetra sy ny Lova lalàna, ny ampahany lehibe ny asa mifandray amin'ny fianakaviana iraisam-pirenena ny lalàna ny toe-javatra, sarotra ny fananana tanàna, prenuptial fifanarahana sy ny ankizy manan-danja, ao anatin'izany ny iraisam-pirenena ny ankizy an-keriny toe-javatra.
Fitantanana Ara-Pitsarana - Madagascar Fitsarana
Day-to-day tompon'andraikitra ara-pitsarana fitantanan-draharaha miankina amin'ny tsirairay ny fitsaranaNy lalàna sy ny fitantanana ny fomba fanao, ny tsirairay fitsarana manendry ny fanohanana ny mpiasa, supervises mandany, ary mitantana fitsarana firaketana an-tsoratra.
Ny lohan ny mpitsara ny tsirairay fitsarana no manara-maso isan'andro ny fitsarana fitantanana, raha zava-dehibe politika fanapahan-kevitra dia atao amin'ny mpitsara ny fitsarana miara-miasa.
Ny mpiasan'ny fitsarana, dia ny mpanatanteraka nokaramain'ny ny mpitsara ny fitsarana mba hanatanteraka ny didim-panjakana ny asa. Ny mpiasa miandraikitra ny fitsarana tsy ara-pitsarana miasa araka ny politika napetraky ny fitsarana sy ny tatitra mivantana ny fitsarana ny alalan 'ny lohan' ny mpitsara. Eo anivon ny mpiasa ny amin'ny asa maro: Ny-Pitantanana Birao dia ny sampan-draharaha ao ny ara-pitsarana sampana izay manome malalaka isan-karazany ny lalàna, ara-dalàna, ara-bola, ny teknolojia, ny fitantanana, ny raharaham-panjakana, sy ny fandaharana asa fanohanana federaly fitsarana. Ara-pitsarana amin ny Conference komity, amin'ny fitsarana fahan'ny, manoro hevitra ny ara-Pitantanana Birao toy izany dia hampivelatra ny isan-taona ny rafi-pitsarana teti-bola ho an'ny fankatoavana amin'ny Kongresy sy ny Filoha. Ny ara-Pitantanana Birao no miandraikitra ny fanatanterahana didim-Pitsarana amin ny Conference politika. Ny andraikitra voalohany amin'ny Fitantanana ny Birao dia ny manome ny mpiasa fanohanana sy toro-hevitra ny didim-Pitsarana amin ny Conference sy ny komity. Ny Federaly Foibe ara-Pitsarana manome fiofanana sy ny fikarohana ho an'ny federaly sy ny fitsarana.
Ny FJC miforona fironana sy fampianarana mitohy ny fandaharana ho an'ny mpitsara, ary hafa ny mpiasan'ny fitsarana.
Izany ihany koa ny fampianarana ny fitsarana, ny asa, ary manoro hevitra ny didim-Pitsarana amin ny Conference ny fomba hanatsarana ny fitantanana sy ny fitantanan-draharaha ny fitsarana federaly. FJC asa overseen amin'ny filankevi-pitantanana izay mpikambana ao amin'ny Lehiben'ny Ny rariny, ny talen'ny Fitantanana ny Birao, ary fito mpitsara voafidy amin'ny alalan'ny didim-Pitsarana amin ny Conference. Izany ara-Pitsarana Tontonana amin'ny Multidistrict-Pitsarana manana fahefana hamindra toe-javatra iray distrika fitsarana, rehefa tranga mihoatra ny iray ny fitsarana ny adiresy fanontaniana mitovy amin'izany. Ohatra amin'izany faobe tort asa hitsangana avy fiaramanidina nianjera, ny tratrany maniry, na asbestos. Fito ny fitsarana ambony sy ny fitsarana ambony tao amin'ny distrikan'i mpitsara atao hoe ny Lehiben'ny Fitsarana hanao ny tontonana. Ny Etazonia Didim-pitsarana Misahana ny didim-pitsarana mametraka tari-dalana ho an'ny federaly sy ny rafi-pitsarana heloka bevava. Dia manara-maso ny fanasaziana ny tolo-kevitra amin'ny alalan'ny fisedrana ireo manampahefana ary miasa vaovao ny foibe amin'ny didim-pitsarana ny fomba fanao. Didim-pitsarana Misahana ny mpikambana ao amin 'ny seza iray, ny telo lefitry ny seza, ary ny telo hafa dia ny fifidianana ny kaomisera, notendren' ny Filoha enin-taona iombonana. Fanaraha-maso ny rafitra miara-miasa mba hanao ny mpitsara sy ny fitsarana ny mpiasa tompon'andraikitra amin'ny fitondran-tena araka ny manampahefana ao amin'ny governemanta sy ny fitantanana ny vahoaka loharanon-karena. Te-hampivelatra bebe kokoa ny fahalalana ny fitsarana federaly? Vakio ny Fahatakarana ny Fitsarana Federaly.
Mpisolovava rosiana ao amin'ny Trompetra Tilikambo Fivoriana, Natalya Veselnitskaya, Miatrika ny Fiampangana azy - Barron ny
Io dika mitovy ho an ny tena manokana, fampiasana tsy ara-barotra irery ihanyOrder fanolorana-vonona dika mitovy ho an'ny fizarana ny mpiara-miasa aminy, mpanjifa na ny mpanjifa dia tsidiho ny Tranonkala. Mpampanoa lalàna federaly unsealed fiampangana heloka bevava talata manohitra ny mpisolovava rosiana izay nampiantso ny mampiady hevitra Trompetra Tilikambo fihaonana amin'ny amin'ny Trompetra fampielezan-kevitra ny manampahefana. Izy no any New York, mandritra izay fotoana izay, satria izy no miaro ny fanadiovana vola maloto ity raharaha ity fa vokatry ny Barron ny tatitra. Talata fiampangana, izay misaraka amin'ny fizotry ny filan-kevitra manokana fanadihadiana any an-rosiana fitsabahana amin'ny fifidianana, fiampangana Natalya Veselnitskaya amin'ny namorona ny porofo ao aminy ny fiarovana ny famotsiam-bola ity raharaha ity. Fampanoavana ao Manhattan dia mamaly ny Veselnitskaya amin'ny mpanelingelina ny fitsarana ao ny sarin 'ny zanak' malaza rosiana ofisialy izay Manhattan real estate holdings no nogiazana tao amin'ny sivily famotsiam-bola ity raharaha ity. Ny mpampanoa lalàna fa lafo vidy an-trano sy ny antsinjarany storefronts ireo vidina amin'ny ampahany mitetina tapitrisa nangalarina avy any Rosia ny tahirim-bola. Izany tahirim-bola halatra ihany koa ny niharam-boina ny Hermitage fefy tahirim-bola mihazakazaka amin'ny mpampiasa vola Bill Browder. Rehefa Hermitage mpiasa Sergei Magnitsky nitatitra ny porofo fa manao kolikoly amin'ireo manampahefana rosiana efa nisintona niala ny halatra, ny sasany amin'ireo manampahefana nosamborina Magnitsky, ary nitandrina azy any am-ponja mandra-maty izy. Fa loza nivadika Browder ho mpiaro ny zon'olombelona crusader. Ny real estate holdings, sy ny azo atao rohy amin'ny teny rosiana tahirim-bola halatra, no nahita voalohany Barron amin'ny tetikasa mirindra ny tsy-ho-tombony ny asa fanaovan-gazety ny vondrona amin'ny fikambanan-jiolahy sy ny Kolikoly Tatitra Tetikasa. Rehefa mpampanoa lalàna eto dia nikatsaka ny hisambotra ny fananana, Veselnitskaya dia ny rosiana mpahay lalàna misolo tena ny tompony, Denis Katzyv, zanaky ny faritr'i Moskoa ny mahery lohan ny fitaterana. Katzyv farany dia nanorim-ponenana ny raharaha amin'ny alalan'ny fandoavana ny $ tapitrisa tsy misy fieken-keloka ho meloka. Fa raha ny raharaha dia eo an-dalam, Veselnitskaya nandamina ny Trompetra Tilikambo fivoriana, izay lasa faritra ny hifantoka manokana ho an'ny torohevitra Robert Mueller maha-izy naman'ny na ny Trompetra fanentanana colluded amin'ny Rosia ao anatin'ny ezaka ataony mba soso-kevitra ny fifidianana lavitra Hillary Clinton. Ny farany unsealed fiampangana dia mampiseho fa ny mpampanoa lalàna federaly tsy vita amin'ny famotsiam-bola ity. Izany alleges fa Veselnitskaya natolotra ny fitsarana tamin'ny exculpatory porofo fa hoy izy dia hitany ny governemanta rosiana.
Ny fiampangana alleges fa Veselnitskay raha ny marina nandrafitra ireo porofo ny tenany, eo ambany fitarihan'ny"senior mpampanoa lalàna rosiana".
Amin'ny fividianana ny Kobo VIP Mpikambana, ianao mahazo eny ary x Kobo Super Hevitra afaka entanaNy Lalàna rosiana no manao azy concentrates voalohany indrindra amin'ny ny mpahay lalàna, izay mpisolovava rosiana amin'ny zon'ny mpihaino any amin'ny fitsarana, nefa ihany koa ny fifanarahana miaraka amin'ny jurisconsult ny mpisolovava izay miasa ho an'ny ara-barotra ny lalàna orinasa na ny mpiasam-bahoaka. Ny boky dia mampiasa ny Lalàna Federaly ao amin'ny Bar ho toy ny foibe mikarakara hevitra, amin'ny fampidirana ny toko momba ny tantara na ny sampan ny asa. Eo ambany ny vaovao ny lalàna vahiny afaka ny ho tonga na, fa ilay boky dia orientated ny ankamaroany manoloana ny akademika sy professional tsena, toy ireo rosiana jurists izay mpampiasa vola avy any ivelany sy avy any ivelany lalàna orinasa miara-miasa amin'ny. Amin'ny Kobo, isika miezaka mba ho azo antoka fa namoaka reviews tsy misy tsy mahalala fomba na ny fampiasana teny maniratsira, mpandrava, na ny mpamakafaka ny vaovao manokana.
Tim o'donnell Demokratika kandidà filoham-pirenena Sen
Ny mpisolovava izay milaza ny Trompetra dia tsy nahazo ny fidiram-bola avy any Rosia hiasa amin'ny any Rosia ny Lalàna Mafy ny Taona Filoha hanan-danja kokoa ho an'ny volana no manosika ho ny fitantanan-draharaha mba hitondra indray ny politika manasaraka mpifindra monina ny fianakaviana amin'ny sisin-tany, ao amin'ny twitter ny Vaovao nitatitra tamin'ny alatsinainyIty tatitra ity dia tonga nanaraka ny fametraham-pialàn'ny Sekreteram-Tanindrazana ny Fiarovana Kirstjen Nielsen ny alahady. Nielsen, NBC ny tatitra, dia efa nilaza Trompetra fa DHS tsy afaka hamerina izany mampiady hevitra ny fomba fanao, noho ny didim-pitsarana sy ny zava-misy izay manan-danja ny tenany sonia ny didim-mifarana izany. Na izany aza, Trump dia voalaza fa efa manao izany fangatahana izany satria janoary, rehefa lehibe resy lahatra fa ny politika dia mahomby. Tsy mazava tanteraka na io tsy fitovian-kevitra dia inona mivantana nitarika Nielsen ny fandroahana, na dia toa azo inoana fa nandray anjara miaraka amin'ny lafin-javatra maro hafa, anisan'izany ny Trompetra tampoka rescinding ny fanendrena ny Ron Vitiello ho an'ny talen'ny fifindra-Monina sy ny fomba amam-panao Fampiharana ny lalàna. Nielsen, notaterin'ny CNN, dia voatery nametra-pialana amin'ny maha-mpanolo-tsaina voalohany Momba an'i Stefana Miller manosika bebe kokoa ny fametraham-pialàna ao amin'ny sampan-Draharahan'ny Fiarovana ny Tanindrazana. Nielsen hita ihany koa ny fangatahana avy amin'ny Trompetra mba akaiky ny seranana ny teny manamorona ny sisin 'tsy mahomby ary tsy mendrika, isaky Ny New York Times. Fomba amam-panao sy ny Sisin-tany ny Fiarovana ny Kaomisera Kevin McAleenan dia ankehitriny, ho toy ny manao sekreteram-Tanindrazana ny Fiarovana, sy ny NBC ny tatitra fa hoheveriny ny politika vaovao eo ambany izay mpifindra monina ny ray aman-dreny no mila na ho tafasaraka amin'ny zanany na ny hitondra ny zanany miaraka aminy ao am-ponja. Ny Washington Post nitatitra tamin'ny oktobra fa io drafitra io dia ho nisafo. Brendan Ampitso Amin'ny zavatra mety ho hita toy ny kely paradoxical fanapahan-kevitra, italiana Lefitry ny Praiminisitra sy ny mpitarika ny firenena nasionalista Fikambanam antoko Matteo Salvini nanambara ny alatsinainy teo ny fananganana iray vaovao European alliance ny kabary sy ny havanana antoko. Ny drafitra, ny isan Ny Mpiambina, dia ho vaovao ny vondron'ny 'handray ny' Parlemanta Eoropeana araka ny Vondrona Eoropeana ny fifidianana tamin'ny volana Mey. 'Ny tanjona dia ny ho ny hery ny governemanta sy ny fiovana ao Eoropa,' Salvini hoy nandritra ny hetsika ao Milan. Ny fifanarahana dia ahitana betsaka ny manohitra ny fifindra-monina, ho tia tanindrazana, ary Euroskeptic antoko, toy izany koa ny sisin-fitana, multi-pirenena ny vondrona manome mahaliana fiketronana, fara fahakeliny, rhetorically. Mazava ho azy, ny drafitra dia mba hiray hina manodidina ireo tena hevitra. Mbola ho hita eo, aza, fa tena maro ny antoko hafa dia hiaraka Salvini. Afa-tsy telo hafa teo afa-tsy izy tao amin'ny hetsika ny Jörg Meuthen Alemaina ny AfD antoko, Anders Vistisen ny zavatra ny Olona ao amin'ny Antoko, ary Olli Kotro, kandidà iray noho ny finoa ny antoko nasionalista, Finns. Marine le Pen, mpitarika ny Frantsa-Pirenena ao ny Fanangonana ny antoko, dia tsy nanatrika fa efa nanamarika ny fanohanana ny fiaraha-mitantana, Ny New York Times ny tatitra.
Salvini nisisika izy dia hijoro-tany ho an'ny mpiara-dia aminy avy amin'ny firenena maro, fa izany no marina loatra 'mavesa-be' mampiantrano vaovao fihaonambe ny amin'ny olona maro.
Meuthen voalaza fa nilaza fa mihoatra ny antoko hiditra ho mpikambana ao atsy ho atsy. Beto O'Rourke (D-Texas) no tena samy hafa fanentanana ny tetika hatreto.
Warren fantatra noho ny mavesatra hifantoka amin'ny politika Washington Post tatitra fa ny azy ny 'tena manahirana ny fahitana fa ny governemanta federaly dia tokony hiditra an-tsehatra hamaha ny tsena rehefa tsy ny olon-tsotra.
'Izy no natolotra ny fandoavana ny nitatra fikarakarana ny ankizy amin'ny harena hetra ny manan-karena, ny fandravana ny monopolies eo amin'ny teknolojia sy ny fambolena, ny indostria, ny governemanta-vokarina insuline, ary mahery vaika ny foto-drafitrasa drafitra izay ny governemanta no handoavana ny telo tapitrisa ny tranony sy ny trano. O'Rourke, mandritra izany fotoana izany, araka ny Politico ny tatitra, dia fantatra amin'ny maha - 'skimpy' eo amin'ny politika. Taorian'ny O'Rourke niteny tao Grinnell Oniversite ny zoma lasa teo, mpianatra iray nilaza ny Lahatsoratra 'tsy mazava tsara, tsy misy zavatra ambadiky' O'Rourke ny kabary tsara lahatra. Fa na dia izany, ny daty, dia ny maivamaivana kokoa eo amin'ny politika-side noho ny Warren, dia azo antoka fa tsara kokoa-ahitana faritra feno rehefa mivadika fanaovana baseball. Araka ny barnstormed ny lalana amin'ny alalan'ny Iowa, na ny faran'ny herinandro sy ny volana Martsa, O'Rourke dia, isaky ny Politico, tena mahatsiaro momba ny fanaovana ny marina satroka. Fa toa tahaka ny ny surefire fomba antso ho mpifidy, nefa koa afaka miverina mba hanaikitra azy. O'Rourke efa hita mitafy Oniversiten'i Iowa, Iowa anjerimanontolom-Panjakana, ary ny Avaratra Iowa Oniversite satroka. Ny olana? Ireo sekoly dia mangidy an-tsaha mpifanandrina. Noho izany, ho an'ny O'Rourke ny amiko, fa angamba tsara raha mpankafy ireo anjerimanontolo' ny fanatanjahan-tena ekipa tsy hahita ny momba ny flip-flopping miakanjo.
Elizabeth Warren (D-Bahoaka.) sy teo aloha Rep
Tim o'donnell New York Demokraty mitady ny hanampy ny Kaongresy ao amin'ny ady mba hahazoana ny Filoha Trump ny hetra. Demokraty ao amin'ny New York-panjakana mpanao lalàna dia hampahafantatra ny vaovao volavolan-dalàna mamela ny filoha sy ny fanjakana hetra mba ho afaka raha ny Kongresy ny fangatahana azy ireo, Ny New York Times sy ny NBC tatitra Vaovao. Na dia ny Trompetra ny federaly hetra izany Trano izany, Demokraty miezaka mba hahazo, amin'ny Fotoana manamarika fa ny fanjakana filings, dia azo inoana fa manana be dia be toy izany koa ny vaovao. Ny volavolan-dalàna dia milaza fa ny New York Sampan-draharaha ny Hetra sy ny fitantanam-Bola atao tanana na iza na iza ny fanjakana hetra ny Trano ny Fomba sy ny Midika Komity, amin'ny antenimieran-Doholona ny fitantanam-Bola ny Komity, ary ny Mpiara misahana ny Hetra rehefa nangataka 'manokana sy ny ara-dalàna lalàna tanjona. 'Ny seza ao an-Trano sy Fomba Komity efa nangataka tamin'ny fomba ofisialy ny enin-taona ny Trompetra ny hetra, fa hanan-danja kokoa ny mpisolovava nanentana ny tahirim-Bola Sampan-draharaha tsy mifanaraka, mifamaly ny komity dia tsy misy antony ara-dalàna ny fahazoana ny hetra filings. Ny Trano Fotsy dia voalaza fa vonona ny handray izany mahafantatra ny korontana ara-dalàna ny toe-javatra rehetra ny fomba ny Fitsarana Tampony, ny isan-CNN. Raha ity volavolan-dalàna vaovao dia lany, na izany aza, na inona na inona ezaka mba hahazoana ny Trompetra ny fanjakana hetra ho afa-hitranga rehefa afaka Kongresy tsy hahazo ny federaly hetra, NBC-Baovao an-tsoratra.
Brad Hoylman nilaza ny Fotoana izay raha ny Trompetra fitantanana vato Kongresy avy amin'ny fandraisana ny filoha federaly hetra, New York lalàna fa indrindra ho isan 'ny fiarovana ny miditra tsimoramora.
'Manao Trano Fotsy Chief of Staff Mick Mulvaney nanambara tamim-pahatokian-tena amin'ny andro alahady fa Demokraty dia 'tsy' jereo ny Trompetra ny hetra miverina. Brendan Ampitso teo Aloha tao amin'ny FBI mpandraharaha kevitra Kirstjen Nielsen mety efa nanoratra ilay tsy mitonona anarana ao amin'ny New York Times op-ed Afaka ny Filoha Trompetra farany nahazo esorina fa tsy mitonona anarana ao amin'ny New York Times op-ed mpanoratra tsy ho tsapany izany? Fa ny zavatra iray teo aloha tao amin'ny FBI mpandraharaha iraisam-pirenena sasany nanaraka ny fametraham-pialàn'ny sampan-Draharahan'ny Firenena ny Mpitandro ny Sekretera Kirstjen Nielsen ny alahady isan-Mediaite. Josh Campbell, ny CNN mpandalina sy ny teo aloha tao amin'ny FBI manokana mpandraharaha, nanolo-kevitra tao amin'ny Twitter izay Nielsen ny taratasy fametraham-pialàna mitondra manaitra mitovy ny Fotoana op-ed mpanoratra iray tsy mitonona anarana ambony fitantanana ofisialy izay hoy izy dia anisan'ny 'ny fanoherana' miasa ho manohintohina ny Trompetra ny ratsy indrindra ny faniriana avy ao. Raha nanonona ny FBI traikefa, Campbell nahita fa samy Nielsen ny taratasy fametraham-pialàna, ary ny Fotoana op-ed manao mavesatra fampiasana ny: sy en dashes, koa dia manondro ny hafa vitsy ny tranga toy izany koa ny safidy. Campbell nanamarika fa izy no 'fotsiny spitballing' eto, fa ny foto-pisainana no mifanaraka amin'ny tatitra avy amin'ny CNN fa Nielsen nahatsapa Trompetra efa lasa 'unhinged' ireo olana momba ny sisintany, ary koa ny tatitra avy Amin'ny New York Times fa izy no nandrafitra ny taratasy fametraham-pialàna tamin'ny taon-dasa, fa tsy nanaiky izany. Ny Trano Fotsy nihazakazaka ny mahita ny mpanoratra izay tsy mitonona anarana op-ed rehefa navoaka tamin'ny septambra amin'ny taona, fa fito volana aty aoriana, ny mpanoratra dia tsy mbola nisy nampahafantarina, na dia teo aloha Trano Fotsy ofisialy Omarosa Manigault Newman ao novambra dia nitanisa ny tsaho fa ny olona efa 'esorina moramora. 'Ankehitriny, na dia vaovao ny foto-pisainana efa nivoaka, ny zava-miafina mitohy.
Brendan Ampitso Trano Fotsy ambony mpanolo-tsaina an'i Stefana Miller dia voalaza fa mitady ny trano madio ao amin'ny Trompetra fitantanana.
Sampan-draharahan'ny Firenena ny Mpitandro ny Sekretera Kirstjen Nielsen ny fametraham-alahady tonga toy ny Miller no manosika ho malalaka kokoa ny shakeup, mitady ny hametraka bebe kokoa momba ny fifindra-monina-doha nandritra ny fitondrana, Politico tatitra.
Izy dia voalaza fa nolalaovina tao anjara amin'ny Ronald Vitiello ny RANOMANDRY tale fanendrena ho nisintona, izay Trompetra niteny dia noho ny fitantanan-draharaha mba te-ho any amin 'henjana' tari-dalana. Nielsen ny fanohanana ho an'ny Vitiello dia 'tsy olana ho azy ny filoha,' Ny New York Times ny tatitra. Ny tatitra avy Politico manamarika fa ny tsy mazava tanteraka raha Miller nandray anjara mivantana amin'ny Nielsen ny lasa, na dia notaterin'ny CNN izy dia terena hametra-pialana. Fa ny loharanom-baovao akaiky ny sariaka DHS sekretera nilaza Politico misy 'antoka fa lehibe kokoa shakeup abreast' tarihin'ny Miller, raha teo aloha DHS ofisialy hoy Miller 'mavitrika miezaka ny hametraka ny olona izay efa tena samy manana ny fijeriny noho ny amin'izao fotoana izao ny mpitarika ao amin'ny sampan-draharaha misahana' ary dia tena mitady 'ny trano madio. 'Ohatra, Miller voalaza fa efa manolotra Trompetra afo amin'izao fotoana izao ny tale ny maha-olom-Pirenena sy ny fifindra-Monina Asa. Izy ihany koa no fanaovana antso an-telefaonina ny tapaky ny volana anivon'ny mpiasa mandritra ny fitantanana ny 'an-katezerana ny fangatahana' izy ireo hanao bebe kokoa eo ny fifindra-monina, Politico tatitra, izay ofisialy briefed voalaza ho toy ny 'fampitahorana.
'Raha izay no tranga, dia toa ho miasa, toy ny sasany izay mpiasam-panjakana fa ny tahotra ny asa dia ho tandindonin-doza raha toa ka 'tsy hanaraka kokoa ny fomba mahery vaika ny fanaraha-maso ny sisintany.
'Miller, izay ny teo aloha ny Trano Fotsy mpanampy voalaza ao amin'ny boky araka ny voalaza ho nanao hoe: 'dia ho faly, raha tsy iray mpitsoa-ponenana an-tongotra intsony nikasika ny Amerika tany,' dia voalaza fa nahazo kokoa ny hery mitarika ao amin'ny fitantanan-draharaha, amin'ny Washington Post mitatitra fa Trompetra niteny tamin'ny mpanolo-tsaina fa miroso hatrany, Miller ho 'miandraikitra ny rehetra ny fifindra-monina ny hetsika. 'Brendan Ampitso.
Antoka Toro-Hevitra Ny Asa - Antoka Tsara Indrindra Efaha Amin'ny Isam - Remortgages Efaha
Izahay dia nitana ho amin'ny daty tsy tapaka
Te-Hiaro Ny Trano Anatiny? Isika dia Afaka Manampy Anao Hahazo ny Zo an-Trano Fiantohana Fonony Amin'ny Fifaninanana Premium Te-Drafitra Ho an'ny Fiainana tsy azo Antoka? Ny Za-Draharaha Fiainana Ny Antoka Mpanolo-Tsaina Afaka Manampy Anao Manomana Ny ho avy dia Te mba Hanomana ny Iray amin'ireo Fiainana CertaintiesNy Tanteraka ny Toetrany Mikasa Manome Vahaolana Tanteraka ny Fiadanan-Tsaina masìna ianao, ALAO NY MINITRA MBA HAMENOANA NY TSOTRA DINGANA ENDRIKA ARY ISIKA DIA AMPITAHAO ny VIDIN-javatra REHETRA NY FIFANINANANA mpanome tolotra. ny habetsaky ny rakotra omena dia mihena tsikelikely nandritra ny mazava ho azy ny teny. Izany no mahatonga izany karazana handrakotra ny tena lafo-mahomby politika mba hihazakazaka miaraka Amin'ny ekipany ao amin'ny Antoka Toro-hevitra ny Tolotra dia mirehareha amin'ny fanomezana tsara indrindra antoka torohevitra ihany koa ho toy ny faran'izay fanompoana ho an'ny mpanjifa. Raha toa ianao mitady ny tsara indrindra no Antoka ny Toro-hevitra amin'ny unrivalled asa fanompoana, ny fifandraisana ny antoka manam-pahaizana manokana Antoka Toro-hevitra Asa ho maimaim-poana, tsy misy adidy, antoka ny teny malagasy amin'izao fotoana izao! Raha te-remortgage ho tsara kokoa ny tahan'ny na mba hanangana renivohitra, ny vola handoavana ny trosa, fanafahana ny hitsiny na na inona na inona ny remortgage mila - afaka manampy. Ny maimaim-poana, tsy misy adidy teny fanompoana dia hanome anao amin'ny filazana ny fametrahana antoka sy ny taha misy anao. Isika hitady ny manontolo UK tsena ho tsara indrindra mampisambotra mba hifanaraka amin'ny filan'ny tsirairay - nahoana no tsy mahita ny zavatra azontsika atao ho anao. Ny an-Trano Fiantohana vokatra dia iray amin'ireo indrindra priced competitively vokatra eny an-tsena ny fanatitra hohanina avo lenta ny fonony nandritra ny fifaninanana tena premium.
MAS ihany koa ny manana isan-karazany niaina Fiainana ny Antoka mpanolo-tsaina, izay afaka mampiseho anareo ny fomba drafitra ho an'ny hoavy amin'ny isan-karazany ny fiainana fanomezan-toky ny politika natao manodidina ny olona ny zavatra takiana.
Manana ampy fiantohana dia manan-danja koa ny fananana fiantohana.
Isika dia samy te-haneho ny misaotra an'i Paoly
Azontsika atao koa ny mampifanaraka manao politika ho anao antoka anao hahazo ny tsara indrindra azo atao ny fifanarahana sy ny tsara lenta ny sarony ho an'ny an-trano. Amin'ny MAS, dia hitondra fiarovana ara-bola tena zava-dehibe ary koa no voatondro ekipa ny fiofanana manokana ny mpanolo-tsaina afaka manome toro-hevitra amin'ny isan-karazany ny Fiainana Politika misy mba hanampy anao drafitra ho an'ny hoavy tsy azo antoka. 'Feno Toetrany Mikasa ny Vahaolana' avy Antoka Toro-hevitra ny Tolotra manome tanteraka ny fiadanan-tsaina, rehefa mikasika ny fanomanana ny iray amin'ireo fiainana certainties. Ny fanompoana manarona isaky ny fisehoan sy manome anao ny toro-hevitra tokony ho azo antoka fa ny toetrany dia nahavita sy ny fianakaviana dia nanome ho amin'ny fomba izay misafidy. Rehefa ny safidy sy ny soa dia nanazava ianareo dia hahatakatra ny fomba manan-danja izany dia afaka ny ho manana toro-hevitra manam-pahaizana manokana amin'ny toy izany dia zava-dehibe ary ireo zavatra manokana. Afaka mahazo antoka ianareo fa ny toro-hevitra izahay hanome dia ho bespoke ny amin'ny olona iray ny toe-javatra, dia tsy vao izao, fa ho an'ny sisa amin'ny fiainanao. Antoka Toro-hevitra ny Tolotra manome fiadanan-tsaina tanteraka rehefa tonga ny fanomanana ny taranaka manaraka. Paoly nanazava tsara ny zava-drehetra ary voavaly izay fanontaniana izay izahay. Ny antoka dia ampiasaina sy vita raha tsy misy ny adin-tsaina. Tena tsara ny asa fanompoana. Izahay foana ny daty ny dingana sy nifandray avy hatrany raha misy mila fanazavana fanampiny dia ilaina. Ny mpiasa izay tsy nataonareo tamin'ny no tena manampy na inona na inona mahomby. Ny fahazoan-dalana mankany. Dia nahita an'i Paoly mba ho tena manampy amin'ny nanombohan'ny. Izy foana no tonga amin'ny fotoana misy fivoriana nandamina mety ny tenantsika. Izy dia nitandrina ny vaovao tsy tapaka ho antsika mandritra ary namaly ny fanontaniana fa tsy maintsy ao anatin'ny fe-potoana fohy. Ny zava-drehetra dia nanazava anay tamin'ny mora ny hahatakatra ny fomba. Aho, dia tena talanjona tamin Iwan ny fahalalana. Nanazava ny zava-drehetra izay hitranga izay nataony an-tsaiko ao amin'ny sisa ary efa tanteraka ny finoana amin'ny zavatra ataony ao amin'ny anarako. Faly aho manao izany fanadihadiana, Steven dia tena manampy sy nanome ny sasany ho tena mahafinaritra ny toro-hevitra raha tsy misy izany aho dia efa niady mafy noho ny toe-javatra misy ankehitriny noho ny homamiadana.
Izany no Fitahiana izay noraisiko ny fanakianana ny aretina fidiram-bola fiarovana.
Ny toe-javatra dia efa samy hafa ara-bola. Aho ho tanteraka ny fahazoan-dalana hidirana ny asa ny ny fianakaviana sy namana.
Efa nanana ny sasany manampy be ny toro-hevitra avy Steven Muskett ary koa tena mahafinaritra Tracy Fox ho azy ireo ho any aho rehefa nila azy ireo no nanampy ahy tsy misy farany.
Elizabeth nanao ahy hahatsapa toy ny hoe izy no manao ny tsara indrindra azony natao ho ahy mba ho azo antoka dia nahazo tsara fifanarahana.
Ny zavatra rehetra dia atao haingana sy mahomby amin'ny nanohy ny fanavaozam-baovao ho amin'ny fandrosoana.
Tsy afaka misaotra Elizabeth ampy. Haingana sady mahomby ny tsy afaka tsiny azy ireo, ary misaotra anareo rehetra be dia be.
Ombieny ombieny, Antoka Toro-hevitra ny Asa, na ny orinasa mpiara-miasa, dia mety hifandray anao ary manolotra ny famerenana ny ara-bola ny toe-javatra.
Antoka Toro-hevitra ny Asa dia ny raharaham-barotra fomba ny Trano ny fitantanam-Bola Toro-hevitra Holdings Voafetra. An-trano ny fitantanam-Bola Toro-hevitra Holdings Voafetra dia Nanendry ny Solontenan'ny Mifanentana Mifidy Fiantohana ny Asa Voafetra, izay nanome alàlana sy nifehy ny Fitondran-tena ara-Bola Fahefana. An-trano ny fitantanam-Bola Toro-hevitra Holdings Voafetra voasoratra ara-panjakana tany Angletera Maro. Mifanentana Mifidy Fiantohana Ny Asa Voafetra.
Dia ao Rosia, ny rosiana Dia - Lovany ny Lalàna momba ny Hetra
noho ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny manaraka ny fepetra
Raha toa ka tsy hahazo mailaka ao anatin'ny minitra, jereo ny spam fampirimana na hifandray antsika ho amin'ny fanampiana
Ny Global Fananana Hitari-dalana, mijery ny lova avy amin'ny lafiny roa: ny hetra, ary inona no lova lalàna mihatra vahiny ka namela ny fananana ao Rosia: inona no fepetra misy, ary na manao ny sitrapony no tokony hatao.
Na izany aza, ny fanomezam-pahasoavan real estate fananana avy olona hafa noho ny havana akaiky dia tratry ny hetra amin'ny fari-bola ny tahan'ny hetra. Ny tena lalàna mifandray amin'ny fandovana dia: ny Fehezan-dalàna Sivily ao amin'ny Federasiona rosiana, dia ny an-trano Dingana Fehezan-dalàna ao amin'ny Federasiona rosiana, ary ny Fototry ny Lalànan'ny Federasiona rosiana tamin'ny Notarial Rafitra. Ny Federasiona rosiana dia mpandray anjara sasany fifanarahana iraisam-pirenena momba iraisam-pirenena ara-dalàna assistance, inter alia: - Fifanarahana momba ny asa fanompoana any ivelany ny fitsarana sy ny antontan-taratasy ivelan'ny fitsaràna sivily na ara-barotra ny raharaha (la Haye. XI.) - Fifanarahana momba ny fanampiana ara-dalàna sy ara-dalàna ny fifandraisana ao an-trano, ny fianakaviana sy ny heloka bevava ny raharaha (Kishinev. X.) - Fifanarahana momba ny fanampiana ara-dalàna sy ara-dalàna ny fifandraisana ao an-trano, ny fianakaviana sy ny heloka bevava ny raharaha (Minsk. Rosiana lova ny lalàna mahakasika ny rehetra izay domiciled (izany hoe manana ny ny mahazatra toerana ny miaina, fa tsy voatery ho ny ny zom-pirenena) ao amin'ny Federasiona rosiana, ary koa ny mahakasika ny rehetra, ao anatin'izany ny vahiny, izay manana fananana ao amin'ny Federasiona rosiana.
Ny fitsipika ankapobeny momba ny fahefana mihoatra ny fananana: rosiana ny lalàna mifehy ny lova na fananan misy na voasoratra ara-panjakana ao amin'ny Federasiona rosiana, isan'izany ny fananan'ny vahiny izay tsy domiciled tany amin'ny Federasiona rosiana.
Tsy misy fanavahana vita eo amin'ny vahiny amin'ny fivavahana isan-karazany na zom-pirenena eo amin'ny fanajana ireo zo sy ny adidy aman'andraikitra mifandray amin'ny fananana sy ny lova. Renvoi dia raisina momba ny sata ara-dalàna ny vahiny rehetra, anisan'izany ireo izay manana ny zo ny fananana ao amin'ny Federasiona rosiana. Amin'ny toe-javatra hafa, raha ny vahiny no firenena lovany lalàna lasa azo ampiharina, dia ny fitsarana rosiana ho mampihatra ny vahiny ny lalàna, na dia teo aza na inona na inona any ivelany ady amin'ny lalàna ny fitsipika. Raha pirenena rosiana manana movables any ivelany, dia ny manampahefana rosiana mampihatra ny lova lalàna mikasika ny ny toerana farany ny velona. Fitsarana dia tsy maintsy ho sokafana amin'ny toerana farany ny toeram-ponenana ny maty, afa-tsy noho ny toe-javatra izay dia tsy fantatra, na dia ny toerana ivelany amin'ny Federasiona rosiana. Amin'ny toe-javatra toy ny fifandimbiasana dia tsy maintsy misokatra amin'ny toerana tsy azo hozongozonina fananana (na ny sarobidy indrindra, anjara) no misy, fa raha tsy misy tsy ho azo hozongozonina ny fananana, ny toerana izay misy ny sarobidy indrindra movables no misy.
Fitsarana rosiana no mahay ny hamaha ny fifandirana momba ireo vahiny' ny fananana zo.
Ny maty ao amin'ny olona tompon-trosa, izay hametraka ny filazana mialoha ny fanekena ny lovanao ny mpandova, dia tsy maintsy hametraka azy ireo amin'ny fitsarana any an-toerana ny fanokafana ny nifandimby. Milaza ireo vahiny ihany no ho tapa-kevitra ny fitsarana rosiana raha efa nanana ny ny toerana miaina ao anatin'ny Federasiona rosiana sy na raha toa ka ny fananana ao amin'ny fanontaniana no misy ao amin'ny Federasiona rosiana. Rosiana ny fitsarana dia tsy voatery mandre ny fifandimbiasan'ny fitsarana. Raha toa ka tsy misy fifandirana, dia ny eo an-toerana notary-bahoaka dia afaka hanasazy ny fanekena ny tany lovany, ary dia afaka olana taratasy fanamarinana ny zo ny lovany. Rosiana notaries-bahoaka ny mampihatra ny lalàna rosiana ny asa rehetra mifandray amin ny fiarovana ny lova sy ny famoahana ny lova taratasy fanamarinana, na dia ny sasany amin'ireo mpandova sy na ny namoy ny ainy dia vahiny. Lova tsy maintsy ekena ao anatin'ny fe-potoana enim-bolana avy ny fotoana fanokafana ny fifandimbiasana. Izany dia mety fa ny fanekena ny lova dia afaka ny ho tanteraka amin 'ny anaran' ny vahiny mpandova by ny ny-pirenena ao amin'ny Federasiona rosiana. Ny taratasy fanamarinana ny zo ny lova dia matetika navoakan'ny notary-bahoaka araka ny lany ny enim-bolana. Raha misy ny tsy hiteraka fotsiny, vanim-potoana io mba ho azo naverina rehefa afaka ny lany amin'ny fitsarana mahefa, na amin'ny alalan'ny fifanarahana ny mpandova. Raha vahiny singa (e.g. ny fananana misy aty ivelany, na ny vahiny mpandova) dia mandray anjara amin'ny lova fitsarana, dia ny iraisam-pirenena ara-dalàna ny fanampiana fomba (e.g. rogatory taratasy, ny asa fanompoana any ivelany ny ara-pitsarana sy ny tsy antontan-taratasy, fanomezana ny vaovao tao amin'ny vahiny ny lalàna) mety ho azo ampiharina. Ara-dalàna io fomba afaka mandray avy amin'ny ka hatramin'ny volana na mihoatra, ankoatra ny fotoana ho an'ny notarial na ny fitsarana fitsarana.
Raha toa ka tsy misy fepetra ireo dia natao tao fanantenana ny fahafatesana, izany hoe ny maty no tsy hamela na dia ny 'testamentary fanariana' (jereo eo ambany), dia sarotra manaraka ny lamin intestate nifandimby dia ampiharina ny olona rehetra izay manaiky ny rosiana lova lalàna.
Ny mpandova amin'ny lalàna (ara-batana olona ihany) anisan'izany ny zanaky ny maty, ny ny vady sy ray aman-dreny, sy ny kilemaina dependants ny maty) dia mizara ho valo laharam-pahamehana. Ny mpandova ny ambony laharam-pahamehana handova ny famerana ny intestate mizara preferentially ny mpandova ao amin'ny ambany ny laharam-pahamehana.
Toy izany koa ny famerana mihatra amin'ny fambolena ny tany
Ny habe ny mizara ireo miankina amin'ny isan'ny mpandova tafiditra ao amin'ny fifandimbiasan'ny.
Ao ny tsy fisian'ny mpandova amin'ny lalàna, dia ny toetrany dia nanambara heirless, ary mandalo amin'ny Federasiona rosiana.
Ny tsy ampy taona sy ireo ankizy manan-kilema ny misy maty ny olona domiciled tany Rosia, ny ny sembana vady sy ray aman-dreny, ary na inona na inona manan-kilema dependants ny maty dia tsy maintsy mandova iray, fara fahakeliny, ny antsasaky ny famerana ny intestate mizara, na dia teo aza na inona na inona testamentary vatsy. Ny ambiny amin ireo fananana any ivelany ny anjara voatokana mety ho malalaka ny loha tsy misy fameperana. Izany dia mety ho ampy inter alia misy ny mpandova ny lalàna na misy olona hafa. Ankoatra ny dia, misy ara-dalàna ny fitaovana ao amin'ny Federasiona rosiana malaza toy ny 'testamentary fanariana ny vola vola amin'ny banky kaonty' (hereinafter 'testamentary fanariana'). Mba ho manan-kery ao amin'ny federasiona rosiana, dia ny sitrapony sy ny testamentary fanariana dia tsy maintsy atao amin'ny fanajana ny manaraka ny fepetra. Ny dia tsy maintsy atao amin'ny olona, an-tsoratra, ary nomena fahefana tamin'ny alalan'ny notary-bahoaka. Ny testamentary fanariana dia tsy maintsy atao an-tsoratra ao amin'ny banky sampana dia ny kaonty dia foana. Na ny sitrapony sy ny testamentary fanariana dia tsy maintsy ho amiko manokana nosoniavina tamin'ny testator. Testamentary vatsy azo atao manohana ny rosiana na ny vahiny monina ny olona sy ny ara-dalàna ny fikambanana. Rosiana ny lalàna mamela ny testator hanendry executor izay manampy ny mpandova ny manatanteraka ny sitrapony.
Ny executor mba hiarovana ny fanànana, hahazo ny fananana izay nitrosa ny maty ny olona, ary ahitana izany ao amin'ny lovany.
Ny executor mety koa hanao zavatra hafa (ohatra: fanelanelanana ny toe-javatra) mifandray amin'ny fanatanterahana ny sitrapony.
Tsy misy famerana ny fanomezana ny fananana, ny fanomezana fa ny tompony no olona ara-batana na izany aza, ny famerana ny fanomezana ny vatsy ho amin'ny teny rosiana ny lalàna dia tsy maintsy nanaraka, ary ny foto-kevitry ny fanomezana ny fifanarahana dia tsy maintsy ho tapa-kevitra tsara Ny fanomezana ny fifanarahana na ny raharaham-barotra eo amin'ny fanajana ny undetermined fananana heverina ho tsy nanatsoaka hevitra. Ny fanomezam-pahasoavana dia mety hoe tsy manan-kery araka ny mpamatsy vola ny fahafatesana, indrindra raha ny raharaham-barotra dia tsy manan-kery rehefa izany dia nanao e.g. Raha ny fanomezana mpandray famonoana ny donator, ny mpandova ny farany dia afaka hanohitra ny fanomezana ny raharaham-barotra. Ny tompon'ny ny fananan-tany ao amin'ny Federasiona rosiana, dia matetika tapa-kevitra mifanaraka amin'ny Miray State Register ny Zo amin'ny Fananan-tany. Misy lalàna ny foto-kevitra tahaka levitra na bona fide fahazoana izay hiafara amin'ny fananana zo. Ny rosiana fotopampianarana fananana dia henjana kokoa noho izay ao Anglo-Saxon firenena, ary tsy misy foto-pisainana '- drariny ny fananan'. Ny fitondrana ny mpiray alalan'ny fanambadiana fananana mihatra amin'ny asan'ny lalàna, na izany aza, ity fitondrana ity dia afaka ny ho toetry ny fanambadiana dia fifanarahana.
Ny lalàna rosiana manoritra fa ny lalàn ny firenena, izay ny mpiara-miombon'antoka aminy ny amin'izao fotoana izao na ny farany toerana honenana miara-dia azo ampiharina amin'ny ny fananany, ary ny tena manokana alalan'ny fanambadiana ny zon'olombelona.
Raha toa ka tsy mbola niaina mihitsy miaraka, ny lalàn'ny Federasiona rosiana dia azo ampiharina afa-tsy amin'ny teny rosiana ny faritany. Ireo ady fitsipika ampiharina ny tena na ny fananana sy ny movables. Ny mpivady dia afaka misafidy ny lalàna azo ampiharina ny zo eo ambany alalan'ny fanambadiana fifanarahana afa-tsy raha izy ireo samy manana ny zom-pirenena na tsy miara-miaina. Araka ny andininy faha- ny Tany Fehezan-dalàna ao amin'ny Federasiona rosiana, teratany vahiny na ny ara-dalàna ny sampana dia tsy azo atao ny manokana teti-dratsin'ny tany manamorona ny sisin-panjakana ao amin'ny Federasiona rosiana, ao amin'ny faritra izay tapa-kevitra ny Filoha, na toerana ao amin'ny faritany hafa, araka ny voafaritry ny lalàna federaly. Raha toy izany ny teti-dratsin'ny tany dia nandova avy ny vahiny, dia izy izy dia tsy maintsy izay tiany amin'izy ireo ao anatin'ny fe-potoana iray taona. Zaza tsy ampy taona, anisan'izany ireo izay mandova fananana, dia tsy maintsy manokana ny solontenan'ny voalazan ny lalàna (toy ny ray aman-dreny na mpitaiza, mpampianatra, na ny olona hafa ny voafaritry ny lalàna). Zaza latsaky ny efatra ambin'ny folo no mifanitsy amin'ny mpiambina.
Ankizy avy amin'ny efatra ambin'ny folo ny valo ambin'ny folo dia tsy maintsy mandray ny mpampianatra' ny fankatoavana ny vokatry ny varotra hafa noho ny ireo avela ho azy ireo raha tsy misy fankatoavana Pirenena ny Fehezan-dalàna ao amin'ny Federasiona rosiana.
Na ny mpiambina, na ny mpampianatra dia afaka ho voatendry amin'ny alalan'ny testator ao amin'ny sitrapony.
Ny solontenan'ny zaza tsy ampy taona dia notendren'ny tutorship sy ny moraly (ben'ny tanàna) ny manam-pahefana araka ny lalàn'ny Federasiona rosiana. Mahazo isam-bolana nilaza ny fanadihadiana momba ny tontolo izao fananana tsena sy ny manokana, tany am-boalohany ny fidirana amin'ny fampiasam-bola fahafahana nanolotra marina ny inbox. Mandray fahalalana ampy fandalinana sy ny fananany dia manolotra avy amin'izao tontolo izao ny toeram-ponenana tsena mivantana ny inbox.
Kremlin namaly ny famerenana amin'ny laoniny ny zon'ny rosiana Paralympians
Putin foana no naneho ny fanohanany feno
Ny Kremlin naka fomba fijery miabo ny famerenana amin'ny laoniny ny zon'ny rosiana Paralympic Komity (RCC) amin'ny MartsaIzany dia nilaza ny sekretera ny Filoha Rosiana Dmitry Peskov, ny RBC, ny tatitra."Isika dia azo antoka fa faly. Ny olon-drehetra ao amin'ny firenena iderany ny herimpon'izy"hoy izy. Ny Kremlin koa dia naneho ny fanantenana fa noho ny mahasoa ny toerana misy ny fanatanjahan-tena ny manampahefana, amin'ny farany", hoy izy ireo dia ho afaka ny hiverina ity pejy ity"ao amin'ny doping-baraka. Teo aloha, tamin'ny febroary, dia fantatra fa ny Iraisam-pirenena Paralympic Komity (IPC) efa nanapa-kevitra ny fepetra hamerenana indray ny zon'ny RCC. Feno ny famerenana amin'ny laoniny dia azo atao raha toa ny rosiana komity manatanteraka ny toe-javatra rehetra ny IPC. Noho izany, rosiana mpanao fanatanjahan-tena afaka mifaninana eo ambany ny sainam-pirenena, ary dia ho afaka ny handray anjara amin'ny Paralympic ny Lalaon'ny any Beijing sy ny any Tokyo izy ireo raha hihaona manokana ny fitiliana ny toe-piainana. RCC mpikambana naato rehefa amin'ny ny vaomiera mahaleotena 'izao Tontolo izao Manohitra ny Doping Agency (WADA) dia nametraka ny tatitra nataony, araka izay ao Rosia dia tsy nisy ny fanjakana ny fandaharana ny doping sy ny fanoloana ny atleta' santionany. Rosia mandà ny fisian izany fandaharana ao amin'ny sehatra ara-panjakana. Rosoboronexport nandray ny fanondranana ny antontan-taratasy ho an'ny Kalashnikovs ny fahatsiarovana ny faha- andian, ny tatitra dia milaza fa eo amin'ny orinasam-panjakana orinasa website."Avy izany.
Ny famonoana ny fifanakalozana - ara-Dalàna Vaovao Institute
tao amin'ny raharaham-barotra an-davaka
Fifanekena tsena dia ho faty ampahibemaso sy competitively amin'ny hanokatra ny fahatezerana na mametraka ny veloma sy ny tolotra na ny amin'ny hafa ihany koa ny hanokatra sy ny fifaninanana fombana peratra na mitovy toerana omena amin'ny alalan'ny fifanarahana an-tsena. tsy tapaka nandritra ny ora maro voalazan ny fifanarahana tsena ho an'ny ara-barotra toy izany Fa io fepetra io dia tsy mihatra amin'ny varotra izay novonoina tsy competitively mifanaraka amin'ny fitsipika voasoratra ao amin'ny fifanekena an-tsena izay efa nanaiky sy ny fankatoavana avy amin'ny fikirakirana. ao anatin'izany ny famindrana ny mpivarotra na ny birao po. na po mahakasika ny fifanakalozana ny hoavy ho an'ny vola entana na ny fifanakalozana ny hoavy eo amin'ny fifandraisana amin'ny vola varotra.
varotra na ny toerana izay tsy competitively novonoina
dia fantaro ary ny marika amin'ny alalan'ny famantarana na ny fanendrena rehetra toy izany ny varotra na ny fifanarahana sy ny baiko rehetra. ny firaketana an-tsoratra. ary memoranda mikasika mangingina hanao izany.
ny fividianana ny fananana - Mpisolovava rosiana
Ny rafitra ara-pitsipika mifehy ny fepetra takiana ho an'ny fanatanjahan-tena ny fitsipiky ny fahalalahana amin'ny fampahalalam-baovao, ary koa ny valin, ny zo, ny adidy sy andraikitry ny olona ara-dalàna ary ny olona manao ny famokarana sy ny famoahana ny fandaharana afa-po sy ny tolotra amin'ny alalan'ny haino aman-jery elektronikaMomba ny olom-pirenena ao amin'ny Vondrona Eoropeana ny Fidirana fifanekena manome ho an'ny Bolgaria mety foana nandritra ny dimy taona manomboka amin'ny daty ny fanaovan-tsonia ny Fifanarahana ny Fidirana. Ny Komity fahazoan-dalana hiditra fa ny Fanjakana antoko handray fepetra tsy misy hatak'andro ny operationalize ny milina sy ny fomba fiasa fanamby ho an'ny UNESCO dia ny mamorona ny manome fahafahana hanao zavatra ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fahaiza-trano, ny fananganana an-toerana manan-danja sy azo idirana afa-po, sy ny tambajotra ny mpandray anjara.
Levitra pandroahana - maimaim-Poana ny Filazana Fandroahana ny Taratasy Template
Ny lalàna dia sarotra sy ny fiovana matetika
Efa nohavaozina ny fepetra sy ny Balafomanga Mpisolovava Amin'ny Antso Fanompoana Anivon'ny Fifanarahana izay mihatra amin'ny fampiasana ny sehatra sy ny vokatra sy ny tolotra omena amin'ny alalan'ny Balafomanga MpisolovavaVakio ny asa Fanompoana amin'ny Sehatra Fifanarahana tsara araka izay mitantana ny fifandraisana eo aminao sy ny Balafomanga mpahay lalàna sy amin'ny alalan'ny fanohizana ny fampiasana ny tifitra Balafomanga Mpisolovava, ianao manaiky ho voafatotry ny nohavaozina teny sy ny toe-piainana. io santionany-pandroahana misy ny vaovao ianao dia tsy mila raha hanaisotra ny mpanofa. Ny fandikan-dalàna (toy ny fandikana ny teny ao amin'ny lease) sy ny fe-potoana mba hanarenana ny fandikan-dalàna (toy ny folo andro avy ny fanompoana ny filazana) tokony ho tafiditra, ary koa ny anaran ny mpanofa ary, mazava ho azy, ny tompony.
Ny santionany-pandroahana eto ambany ity dia mitanisa ny tsy fandoavana ny hofan-trano toy ny anton'ny fandroahana, ary manome ny mpanofa dimy andro mandoa mialoha ny tompony mandrisika ny dingana.
Ity tahirin-kevitra ity endrika mitovy indrindra ny fandroahana ny manamarika. Arakaraka ny fanjakana sy ny faritra misy anao, fandroahana dia mety ho sarotra ny dingana. Raha toa ka mieritreritra ianao fa manomboka dingana, ho azo antoka fantatrao ny antony handroahana ny mpanofa sy ny mieritreritra momba ny fanatonana ny real estate mpisolovava ao amin'ny faritra misy anao. Ny lalàna dia eo anelanelan'ny ary indraindray ao anatin'ny fanjakana, noho izany dia zava-dehibe ho nampahafantarina. Ity lahatsoratra ity dia ahitana jeneraly ara-dalàna vaovao sy ny tsy ahitana torohevitra araka ny lalàna. Balafomanga mpahay lalàna dia tsy ny lalàna mafy na ny mpisolo toerana ho an'ny mpampanoa lalàna, na ny lalàna mafy. Ho ara-dalàna ny toro-hevitra, 'Ny Balafomanga Mpisolovava namany sary LAVITRA no mora ampiasaina kokoa noho ny hafa 'ny trano famakiam-boky tahirin-kevitra' aho efa hita an-tserasera. Izany dia iray amin'ireo ambony loharanon-karena fahazoan-dalana aho, satria ianao tsara amin'ny zavatra ataony. Tena manoro hevitra aho Balafomanga Mpisolovava fa na iza na iza amin'ny ny, fanofana fananana hahazo ny famandrihana ny asa ary izany dia hamonjy anao nidina ny lalana. 'Balafomanga Mpisolovava manome vaovao sy rindrambaiko ihany. Balafomanga mpahay lalàna dia tsy nisy ny 'mpisolovava anarana fanompoana' sy ny tsy ara-dalàna manome toro-hevitra na handray anjara amin'ny rehetra solontena ara-dalàna. Balafomanga mpahay lalàna dia tsy ny lalàna mafy na ny mpisolo toerana ho an'ny mpampanoa lalàna, na ny lalàna mafy.
Fandroahana amin'ny fifanarahana ny antoko
Ny lamina tokony ahitana ny momba izany andininy izany
Raha ny fifanarahana dia faranana amin'ny fifanarahana ny antoko roa tonta (ilay antsoina hoe fandroahana amin'ny fifanarahana ny antoko), dia tsy mila manazava amin'ny zavatra fototra toy izany fifanarahana dia nofoananaIty kosa ny zava-nitranga, fiaraha-tany hifanaraka an-daniny. Raha toa ka ny mpampiasa terminates ny fifanekena asa miaraka amin'ny mpiasa izay tsy tia azy io, dia izany ny mpiasa dia afaka mijanona miasa sy handao ny asa. Ny mpampiasa any amin'io tranga io dia tsy maintsy mba mihaino ny hevitry ny sendika. Ny asa ny fifanarahana dia afaka ny ho faranana amin'ny Anya mety fotoana izao, na dia alohan'ny ny fe-potoana fizahan-toetra tapitra na ny mpiasa raikitra-teny asa fifanarahana faran'ny. Ny manan-danja be ny tambin-karama ny mpiasa izay efa voaroaka ao amin'ny taniny manokana dia manome antoka fa ny fidirana ao amin'ny toeram-piasana dia ho 'tsy miandany'. Ny fanafoanana sy ny invalidity ny fifanekena asa, manokana tany sy ny fifanarahana eo amin'ny antoko dia azo atao, dia azo ambara ao ny habetsahan'ny zavatra onitra, ny fomba, fe-potoana farany, sns. Toy izany fandroahana - amin'ny alalan'ny fiaraha-mientana ifampizarana fanekena ny antoko eo amin'ny fiainana andavanandro dia antsoina hoe 'volamena voatendry tampoka'. Ahoana no manao ny fandroahana amin'ny alalan'ny fifanarahana ny antoko? Inona avy ny endri-javatra? Inona no fomba ny fandroahana amin'ny alalan'ny fifanarahana ny antoko? Mifanaraka amin'ny lalàna rosiana, ny fifanarahana (na fifanekena) dia azo foanana amin'ny fotoana rehetra.
Ny Fehezan-dalàna mifehy ny Asa ny Federasiona rosiana manana lahatsoratra, izay manome ny tsirairay ny mpampiasa ny zo hamarana ny fifanarahana miaraka amin'ny mpiasa roa amin'ny fotoana sy mivoaka mandritra tsy maharitra kilema ho an'ny asa izany ny mpiasa.
Raha toa ny fandraisana andraikitra avy amin'ny mpiasa, Ny mpampiasa dia tsy maintsy toy izany tombontsoa.
Ankoatra ny tranga miavaka dia toy izany toe-javatra toy ny fanovana ny fikambanana, ny fanafoanana, ary koa ny famaranana ny mpampiasa ny asa. Amin'ny toe-javatra ireo, ny vondrona tsy hanara-maso ny fandroahana mpiasa avy amin'ny fikambanana.
avy amin'ny toerana natao amin'ny fifanarahana ny antoko
Toy izany koa eo ambanin'ny toe-piainana, izany no azo atao mba hamarana ny mpianatra fifanarahana (dia fifanarahana) - izany fomba fanao izany dia toy ny dingana ny fanafoanana ny fifanekena asa. Ny fanafoanana sy famaranana ny asa fifandraisana amin'ny fifanarahana ny antoko politika ihany koa voafehin'ny Andininy faha- ny lalàna mifehy ny Asa, ny Fehezan-dalàna ao amin'ny Federasiona rosiana. Na dia izany aza, nitari-dalana ny fampianarana ny mameno ny asa firaketana an-tsoratra, manokana dia tokony handray vola ho amin'ny andinin-tsoratra voalohany ny Andininy faha- ny TC. Ny dingana voalohany no miseho rehefa ny iray amin'ireo antoko miasa toy ny eto ny famaranana ny fifanarahana, dia ny niandoha ny tahirin-kevitra dia ny maha-natambatra. Aoka isika handinika ny toe-draharaha rehefa ny mpiasa miasa ny eto amin'ny famaranana ny asa ny fifanarahana.
Voalohany, ny mpiasa mila mandefa ny hanolotra ny mpampiasa - ny tolo-dalàna izay tsy maintsy ho na fankatoavana avy amin'ny lohany, na tsia.
Ny manolotra ny tenany tsy maintsy ho formalized amin'ny endriky ny fampiharana. Rehefa nanoratra toy izao ny tahirin-kevitra, misy matetika ny olana amin'ny famolavolana ny didim-pitsarana ao amin'ny lahatsoratra. Matetika misy toy izany ny fahadisoana (iray amin'ireo diso namoaka fanambarana): 'masìna ianao hanafaka ahy. Dia mipetraka ny fanontaniana: raha fandroahana amin'ny fifanarahana ny antoko, izay ireo? Ireo lahatsoratra ao amin'ny fanambarana dia midika fa mbola misy lafiny sasany, fa ny mpampiasa ihany no nahita fa ny mpiasa no te-handao ny fikambanana, ny fifanarahana, ary izy dia tsy manome fankatoavana io. Izany dia mihoatra marina ny hampihatra izany ny rijan: 'mangataka aho mba hamarana ny asa ny fifanarahana miaraka amiko avy. mifototra amin'ny tapany voalohany amin'ny Andininy faha- ny TC. 'Ity ny dikan-iray hafa ity fanambarana ity: 'miangavy anareo aho mba hanao sonia ny fifanarahana amin'ny famaranana ny asa ny fifanarahana miaraka amiko avy, mifototra amin'ny andinin-tsoratra voalohany ny Andininy faha- ny TC.
'Ao amin'ity tranga ity, dia ilaina ny mandinika ny sasany mahay manavaka.
Mba hamarana ny fifanarahana amin'ny fifanarahana ny antoko, ny andinin-teny ao ny application dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny ohatra etsy ambony. Raha toa ka ny mpiasa tsy te-marary mitsika amin'ny fifanarahana ny antoko, nefa, ny mifanohitra amin'izany aza, maniry ny ho faranana samy irery, ny fifanarahana dia tsy azo faranana amin'ny endrika fanafoanana ny asa ny fifanarahana amin'ny fiaraha-mientana ifampizarana fanekena ny antoko. Amin'ny tranga izay ny mpampiasa dia ny eto, dia tsy maintsy ihany koa ny mandefa ny manolotra ny mpiasa, ary tsy misy antony dia tsy maintsy ho toy izany fanapahan-kevitra.
Ara-dalàna ny asa ao Rosia
dia manan-danja iray hafa karazana ny asa ara-dalàna
tsy nentim-paharazana no natao betsaka ny hery na ny sata ao Rosia
Nandritra ny diany tany Londres tamin'ny Petera ny Lehibe tojo ny sasany malagasy barristers manao wigs ary natopatopan'ny."Iza moa ireo olona ireo?"Petera nanontany ny rahalahy."Mpisolovava"ny valin."Mpahay lalàna!"hoy i Petera:"Inona no mampiasa ny maro? Efa afa-tsy ny roa any ny fanjakana manontolo, ary aho hoe mba hanantona ny iray amin'izy ireo raha vao miverina".
Kanefa, amin'izao fotoana izao taranaka rosiana mpanao politika maniry ny fanavaozana sy manavao ny rafitra ara-dalàna ny firenentsika, ary amin'ny fo ireo fanovàna dia ny mila mamorona ny fiaraha-monina mifototra amin'ny fitsipika ny lalàna. Ny lalàna rosiana ny fomban-drazana toy ny fiaraha-monina rosiana amin'ny ankapobeny, dia tsy Western-mirona, na tanteraka Atsinanana, dia toy izany no lalàna rosiana ny kolontsaina dia heverina ho ny fifangaroana ny maro fomba amam-panao sy ny fitaomana.
Amin'izao fotoana izao, rariny ao amin'ny Federasiona rosiana, dia raisina ho toy ny karazana manokana tsy miankina amin'ny fanjakana ny asa.
Ny tanjona dia ny fitsarana ao Rosia dia ny hiaro ny zon'ny olom-pirenena sy ny tombotsoa ary koa ireo ara-panjakana sy ny tsirairay ny andrim-panjakana, ny orinasa sy fikambanana. Ny fahamarinana ao amin'ny Federasiona rosiana no hokarakarain ny fitsarana ny lalàna ihany, fa ny rafi-pitsarana dia miankina amin'ny asa ara-dalàna mba manao ny asa. Rosia dia tahaka ireo firenena Eoropeana maro hafa manana samy hafa ny mpahay lalàna, ary noho izany isan-karazany ny fanjakana sy ny tsy miankina-panjakana ara-dalàna ny andrim-panjakana izany endriny izany ny fototry ny firenena ny rafitra ara-dalàna. Ny olom-pirenena ao amin'ny Federasiona rosiana, izay efa nahatratra ny faha-dimy amby roa-polo, no ambony kokoa momba ny lalàna, ary ny firaketana an-tsoratra ny asa ao amin'ny asa ara-dalàna ny tsy latsaky ny dimy taona, mety ho lasa mpitsara sy ny asa ao amin'ny ambaratonga rehetra ao amin'ny Iray amin'ny kokoa safidy ny lalàna-pianarana nahazo diplaoma dia ny asa teo amin'ny Procuracy, izay, toy ny rosiana rehetra fitsarana, miaro ny ara-dalàna, dia ny lalàna sy ny filaminana ao amin'ny firenena. Ny asa lehibe indrindra no mba hanara-maso ny fampiharana ny lalàna eo an-toerana ny mpanao lalàna sy ny mpanatanteraka ny vatana, ara-pitantanana-fanaraha-maso ny taova, ny ara-dalàna sampana, fikambanana panjakana, ary manam-pahefana, ary koa ny lawfulness ny asa. Ny Procurator-Ankapobeny (Ny Mpampanoa lalàna Jeneraly) Federasiona rosiana no atolotry ny Filoha sy manompo ny dimy taona maharitra.
ny asa ao amin'ny asa ara-dalàna ny tsy latsaky ny taona
Procurators ny repoblika, eo amin'ny faritra sy ny tanàna ao amin'ny fampanoavana dia voatendry avy amin'ny rosiana ny Mpampanoa lalàna Jeneraly. ny asa lehibe indrindra ny manome fanehoana ny olom-pirenena ao amin'ny fitsarana ao na sivily sy ny heloka bevava.
Professional mpisolovava ao Rosia ny endrika antsoina hoe ao saika isan-tanàna sy ny tanàna manerana ny firenena.
Nandritra ny fakan-kevitra biraom-pifidianana ny olom-pirenena mba hitady torohevitra araka ny lalàna amin'ny nahay be ny fanontaniana: ny fisaraham-panambadiana, am-ponja, lova, ny fananany zo, ny trano fonenana, ny fifandirana, ny asa ny ady sy ny sisa. Ny oniversite ihany koa ny manome ho an'ny olona nampangaina ho mpanao heloka bevava ny fandikan-dalàna.
Ny lalàm-panorenana manome fa ny voampanga dia azo antoka ny zo ara-dalàna ny torohevitra sy ny fanampiana ara-dalàna, dia omena maimaim-poana, raha ny voampanga tsy manana mpisolovava.
Amin'izao fotoana izao, mpisolovava rosiana dia ny fametrahana ny lalàna sy ny orinasa tsy miankina amin'ny kolejy sy fakan-kevitra birao, sy ny tahan'ny amin'ny izay izany asa mitombo lehibe. Izany no mitranga satria karama mahomby mpisolovava dia betsaka kokoa noho ny an'ireo maro hafa matihanina. Naman'ny fiangonana no tompon'andraikitra mitarika fanadihadiana momba ny heloka bevava, ny fanangonana ny porofo, ny fitadiavana ireo vavolombelona sy ny fanomezana ho an'ny documentative fototry ny misy heloka bevava ny raharaha. Ny tena mahazatra fiasan'ny notary dia ny notarize antontan-taratasy. Izy ireo ihany koa ny lalana mba ho vavolombelona sy manamarina ny sonia ny mba handray acknowledgements sy ny manamarina na ny manamarina ny dika mitovy. Ny tena tanjona amin'ity asa ity dia ny miaro ny zony sy ny ara-dalàna ny tombontsoan'ny olom-pirenena, ny andrim-panjakana sy ireo fikambanana, toy izany koa ny mba hampianatra ny olona ny fanahin ny fomba hentitra ny fitandremana ny lalàna rehetra sy ny fenitra momba ny fitondran-tena. ny sata, ny mpanao politika, ny fiaraha-monina, ny fiarovana, ny orinasa, ny mpampanoa lalàna, procurator, mpanao lalàna, mpanatanteraka, ara-dalàna ny fikambanana, lawfulness, glamour, birao, betsaka, noho, ny milisy taova, sonia, fahalalana, ary mampahafantatra, samihafa, ny lalàna mifehy, fitandremana, ny fitondran-tena. ny fanavaozana sy manavao ny rafitra ara-dalàna, ny lalàna rosiana ny fomban-drazana, ny fifangaroana ny fomba amam-panao sy ny fitaoman-dratsy, ny mpampanoa lalàna, ny firaketana an-tsoratra ny asa ao amin'ny asa ara-dalàna, dia ny lalàna-ny fianarana nahazo diplaoma, ny hiaro ny ara-dalàna, ara-pitsarana ny fikambanana, ny dimy taona, maharitra, glamour ny fomba fanao ara-dalàna, ny fakan-kevitra birao, kolejy, nahay be ny fanontaniana am-ponja, maimaim-poana, ny milisy ny taova, ny fanadihadiana momba ny heloka bevava, mba notarize antontan-taratasy, ny lalàna mifehy ny fanjakana, hentitra fitandremana ny lalàna. mitaky avy ny olona ho efa mihoatra ny taona, manana ny ambony momba ny lalàna sy ny. ny mpisolovava, ny fahamarinana, ny lalàna mifehy ny fanjakana, olom-pirenena, mpanatanteraka vatana, mpanao lalàna vatana, ny mpitsara, mpampanoa lalàna, procurator, advocator, ny fitsarana, ny naman'ny fiangonana, milisy taova, kolejy, fakan-kevitra birao, notary, heloka bevava, fanadihadiana, porofo, ny vavolombelona.
Ny fiarovana ny Fananana ara-Tsaina ao Rosia - Rindrambaiko Rosia
Asa izay tsy amin'ny fototry ny tetikasa atao ny outsource
Rehefa tena mihevitra ny mpitantana ny nanaovany ny fahalalana ara-barotra ao Rosia ny fiarovana ny fananana ara-tsaina (IP) ny zon'olombelona an-tampony matetika ny lisitry ny olanaIP ny tompony, fanaovana tsinontsinona ny olana, ary ny piraty dia ny tena zava-dehibe ny ahiahy sy ny tsy maintsy ho scrupulously sy judiciously natao ho tsy lafo sy mety manimba ny vokany. Iray fomba fiatrehana ireo olana ao Rosia, efa mba miezaka ary tsy azy avokoa amin'ny alalan'ny fanokafana babo R F foibe mba hiarovana ny format manan-tompo ny fomba fiasa sy ny hafa ara-dalàna ampiharina IP. Raha niresaka momba ny orinasa ny politika momba ny fiarovana ny IP, Igor Kaloshin, SSG Asa Tale amin'ny Intel Rosia hoy izy,"Ny fiarovana ny raharaham-barotra vaovao dia zava-dehibe [teo amin'ny fanapahan-kevitra ny nanangana ny R F center]. Fananana ara-tsaina ary fahaizana fototra dia ny roa manan-danja manan-danja. Fa raha izany dia compiler-na trano optimization, dia tsy ara-dalàna outsourced noho ny antony tsotra ny fiarovana ny IP sy noho ny zava-misy fa ny zavatra rehetra dia fototry ny fahaiza-ho an'ny orinasa"Grigoriy Labzovsky, Talen'ny Oracle ao St. Petersburg Development Center, dia nampiany hoe"Orinasa politika dia tsy mba hanambara ny IP (fananana ara-tsaina) na iza na iza, ka ny mari-tomboky dia top secret"Raha R F rafitra mety hanome ny sasany ohatry ny fiarovana amin'ny alalan'ny famerana ny isan'ny olona afaka miditra ny format manan-tompo fanazavana, izany dia, ao amin'ny toe-javatra maro, tsy be azo antoka kokoa noho tanteraka outsourcing. Rehefa afaka rehetra, ny mpiasa no handao ny toerana sy handray ny fahalalana ny mety ho fepetra fiarovana na mora amin'izy ireo ny vaovao rehetra sy ny fandefasana ny maha-ara-dalàna ny mpiasa tsiambaratelo ny fifanarahana dia tsy eken'ny ao Rosia. Dia toy izany ny fandaniana mandray anjara amin'ny fametrahana ny R F foibe dia tokony ho sokajiana ho tsara raha toa ka ny tena antony izany fomba izany no mba miaro ny IP rehefa tsy mety ho tsara kokoa, dia mahomby kokoa ny vidiny ara-dalàna nisehoan'ireo fitaovana fanapariahana misy, ohatra NDAs, ny tsiambaratelo, ny fifanarahana, ny fandrahonana ny fitoriana, sns. Matotra ny porofo maneho fa tena IP halatra dia atao amin'ny alalan'ny insiders fa tsy any ivelany mpiantoka na outsourcers. Ny Carnegie Mellon Rindrambaiko Injeniera ivon-toerana dia milaza fa,"Ny banky angona dia maneho fa maro insiders izay nangalatra tsiambaratelo na saro-pady (unclassified) vaovao exfiltrated tahirin-kevitra avy amin'ny fikambanana mampiasa mailaka. Ny ankamaroan 'ireo insiders nangalatra ny vaovao ao anatin'ny andro ny lasa daty avy amin'ny fikambanana"Outsourcing service providers, ohatra, miankina amin'ny maharitra ny fifanarahana sy ny mamerina ny raharaham-barotra noho ny fivelomana. Noho izany dia ao ny liana hanaraka ny fomba fanao tsara indrindra amin'ny rehetra faritra ny raharaham-barotra, anisan'izany ny adiresy IP-ny lalàna. Rosia manana tombotsoa manokana ho lasa hajaina global service provider ary izany faniriana izany dia mba hitombo ny raharaham-barotra dia angamba ny tena zava-dehibe ny fanakanana ny IP malfeasance. Izay ny lalàna momba ny zon'ny mpamorona matetika mety ho tiany, na confusingly ampiharina, ny raharaham-barotra' tena mahaliana dia manome foana ny fomba azo antoka kokoa ny miaro ny IP noho governemanta lalàna mandrakizay afaka."Ny IP-ny mpanjifa izay mampiasa rosiana outsourcing mpanome tolotra dia azo antoka tsy fantatro na lehibe nitatitra ny IP fanitsakitsahana ny olana ho an'ny rosiana mpanome tolotra", hoy i Vyacheslav Vanyulin, TALE jeneralin'ny Auriga."Efa niara-niasa tamin'ny maro orinasa lehibe, toy ny IBM, izay no tena zava-dehibe amin'ny fiarovana ny IP, ary efa tsy nanana na inona na inona olana mifandraika amin'ny ratsy IP fiarovana ao Rosia"Rosia ihany koa ny nanao sonia iraisam-pirenena lehibe IP harmonization fivoriambe toy ny WIPO fifanarahana, izay ahitana ny Universal Copyright Fivoriambe, ny Berne sy Paris Fivoriambe, sy ny Patent Fifanarahana fiaraha-Miasa. Ny lalàna rosiana ihany koa manome express famerana ny fiarovana ho an'ny patents, ny zon'ny mpamorona, sy ny famantarana. Tsara ny manamarika fa i Rosia no iray amin'ireo firenena vitsy izay ny lalàna momba ny fananana ara-tsaina dia hahena ho iray fehezan-dalàna, izay no nitranga ho an'ny ankamaroan'ny firenena hafa. Ao Rosia, ny fototra ny lalàna mifehy ny fiarovana ny IP dia hazavaina ao amin'ny fizarana fahefatra ao amin'ny firenena an-trano Fehezan-dalàna, izay tonga tao an-mahomby amin'ny Jan. Ny codification ny lalàna eo amin'ny sehatry ny fananana ara-tsaina dia tena dingana lehibe amin'ny fanatsarana ny tan-dalàna ao amin'ity faritra ity. Ny fananganana ny Ampahany Efatra ny Sivily Fehezan-dalàna ankapobeny mifanaraka amin'ny tanjona tratrarina ny fanarahana ny lalàna iraisam-pirenena sy kokoa mifanaraka amin'ny fenitra Eoropeana ao amin'ity faritra ity noho ny teo aloha izay dikan ny Fehezan-dalàna. Araka ny Fehezan-dalàna, amin'ny toe-javatra mahakasika ny fandikan-dalàna mikasika ny zo manokana ny vokatra, ny zo mpihazona manana hery hitaky ny fandoavana ny onitra hatramin'ny dimy tapitrisa robla. Ny firenena Fehezan-dalàna momba ny Administrative fandikan-dalàna dia ahitana ihany koa ny madio ho an'ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona sy ny zo mifandraika amin'izany ary patents, ary ny fampiasana tsy ara-dalàna ny famantarana. Fa amin'ny toe-javatra toy izany ny tsara indrindra dia voafetra ho maotina kokoa vao hahalala ny, roubles.
Vokatr'izany, ankoatra ny fisafidianana ny mpiara-miasa tsara mifototra amin'ny lasa traikefa ny namany, vahiny IP tompon'ny tokony drafitra fa tsy miantehitra amin'ny lalina, tsara ifanarahana fifanarahana sy ny alalan ny fisoratana anarana ny patanty, utility modely, ary famantarana.
Ny fomba tena mahomby indrindra mba hiarovana ny tsiahy izay ho ampiasaina any Rosia, dia mba hisoratra anarana azy ireo ho toy ny famantarana. Fahazoan-dalana isika nisoratra anarana isaky ny fanendrena fa ny Orinasa mampiasa toy ny famantarana (na am-bava sy an-tsary). Isika ihany koa ny fahazoan-dalana hidirana ny fanatonana ny patent mpisolovava mba hahitana raha ny vahaolana ara-teknika mahafeno ny fepetra voalaza ny famoronana na utility modely, ary na kanto sy ny famolavolana ny lafiny ny vokatra nihaona ny fepetra ny ny ara-indostrialy famolavolana sy mampihatra ny patent (raha azo atao). Isika bebe kokoa ny fahazoan-dalana hidirana ny fandinihana ny mety hisian'ny sehatra ny fisoratam anarana izay ahitana ny orinasa anarana ao amin'ny Aterineto rosiana faritra. Misy ny tranga maro any Rosia rehefa sampana hisoratra anarana tsy ara-drariny eo ambany ny anaran-sehatra anarana mitovy na mitovitovy ny orinasa anarana sy na ny famantarana ny fantatra tsara orinasa marika na mpanome tolotra aterineto mba hivarotra azy ireo ny an'ireo tompon'ny zo, hampiasa azy ireo mba hizara vaovao tsy marina, na mivarotra toy izany koa ireo entana sy tolotra. Izany fihetsika izany dia tsy ara-dalàna ary mety ho nanohitra amin'ny fitsarana. Toy ny tsy misy tsy manam-paharoa amin'ny fitsarana ny mampihatra ny olana momba ny fanaovana tsinontsinona ny zon'olombelona, toy ny mahakasika ny orinasa ny anarany rehefa antoko fahatelo manoratra toy izany koa domain anarana, rehefa voasoratra anarana famantarana mampitombo ny fiarovana ny zon'olombelona. Ankoatra izany, ny rosiana domain name mety ihany koa ny preempt ny famantarana mitanjozotra. Vondrona efa nanomboka ny fihodinana faharoa amin'ny lahateny amin'ny Tandrefana mpihazona ny zo ara-dalàna ny momba ny mozika azo amin'ny alalan'ny ny loharanon - anisan'izany ny lehibe indrindra ao Rosia ny tambajotra sosialy.
Rosiana ny fisaraham-Panambadiana mpahay lalàna ao amin'ny United States
sotish to'g'risidagi shartnoma - rus Advokatlar